Sweden: Diyaarad laga leeyahay Norway, ayaa hawadeena ku xadgudubtay. - NorSom News
Sweden: Diyaarad laga leeyahay Norway, ayaa hawadeena ku xadgudubtay.
Wasaarada arrimaha dibadda dalka Sweden ayaa qoraal ay u dirtay wasaaradaha Arimaha Dibadda Norway ku sheegtay in Helikopter ay leeyihiin booliska Norway, ay ogolaansho la´aan soo gashay hawada Sweden.
Sida uu qoray wargeyska Aftenposten, dhacdadan ayaa dhacday 27-ka bishii May ee sanadkan, waxaana falcelin xoogan ka muujiyay ciidanka difaaca hawadda Sweden, booliska Sweden iyo waliba wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas.
Kala xiriir: 45970350 ama booqo webkooda(Riix Sawirka).
Wasaaradda arrimaha Dibadda Sweden ayaa dhacdadaas ku tilmaantay mid xadgudub ku ah xeerarka hawada Sweden, waxeyna jawaab ka dalbadeen Norway.
Booliska Norway oo lahaa diyaarada ku xadgudubtay hawada Sweden ayaa sheegay in dhacdadaas ay ku dhacday si aan ku talo gal aheyn, waxeyna ku tilmaameen mid mudan in raaligalin laga bixiyo.
Xigasho/kilde: Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium.
Previous articleSiyaasi dhalinyaro soomaali ah oo lagu sharfay xuska maalinta 22-Juli.
Next articleSweden/Denmark: Dhalinyaro soomaali ah oo loo qabtay dilka wiilal soomaali ah